Ukuhlela Territorial - Geofumadas
Ukuphathwa Komhlaba. Uhlelo lwe-Odinensi yesifunda
Ngakanani izwe elifanele emzini wakho?
Umbuzo obanzi kakhulu ongabangela izimpendulo eziningi, eziningi zazo ngisho nemicabango; izinhlobonhlobo eziningi uma umhlaba ungenawo noma ungakakhi, izinsizakalo zomphakathi noma indawo ejwayelekile yendawo. Ukuthi kwakukhona ikhasi lapho singakwazi khona ukubaluleka komhlaba endaweni ethile yedolobha lethu, ngokungangabazeki kube ...
cadastre, Geospatial - GIS, Ukuphathwa Land
ELuhlelweni Lwavelonkhe Impahla Administration (SINAP) is a platform ubuchwepheshe ukuthi luhlanganisa yonke imininingwane ngalokho okuhlobene izinsiza ngokomzimba kanye nokulawulwa isizwe, lapho umphakathi ezahlukene, abadlali yangasese kanye nabantu ukurekhoda yonke imisebenzi ehlobene izimpahla impahla edingekayo ukusungulwa nalomsebenzi emakethe ...
Ngo eziningana amaphrojekthi ngenza, mina ngiye ngazibonela ukudideka esibangela LADM kungukuthi ngempela elihlobene ne aqondwe njengokufaka ISO, kodwa ukuhlukanisa Ububanzi yabo kwesicelo isigaba saso lomqondo imishini zobuchwepheshe. Ngamanye amazwi, ukuthi ungayisebenzisa kanjani. Kumele kucacile ukuthi i-LADM ayifuni ...
Isizinda Sezakhiwo Zokuphathwa Komhlaba - Icala laseColombia
Ukuphathwa kweMhlaba, okwamanje, kuyinye yezinselelo ezinkulu zamazwe. Akusilo isifiso esisha, ngoba umsebenzi wayo ungaphezu kokucacile ezihlokweni ezisemqoka zomthethosisekelo kanye nemithetho ehlukene elawula ubuhlobo babantu abahlala nabo abanezinsiza zomphakathi nezangasese zesizwe. Ngaphandle ...
Umklamo weMephu weMephu yamagugu eLatin America naseCaribbean
I-Lincoln Institute for Land Policy ibiza amavolontiya avela kuwo wonke amadolobha aseLatin America naseCaribbean ukuba abambe iqhaza ekwakhiweni kweMephu yeMigomo yemigomo yesifunda. Lo msebenzi uzokwenzeka kusukela ku-8 kaFebruwari kuya ku-31 ka-Mashi ka-2016. Yazi ukuziphatha kwe ...
cadastre, Okufakiwe, Ukuphathwa Land
Master of Urban Design and Planning [UJCV]
Lesi esinye seziganga zenkosi ezithakazelisayo kunazo zonke esifundeni saseMelika Ephakathi, sicabangela ukubaluleka kunabo ohulumeni basekhaya kanye nokuphuthuma okungaqondakali okukhokhwa ngokuqondiswa kwensimu ngaphansi kokuthuthukiswa komuntu. Kufika ngesikhathi esithakazelisayo, lapho uJoseph Cecilio del Valle University evuselela kabusha ...
Ukufundisa CAD / GIS, Innovations, Ukuphathwa Land
Ukudilizwa kwezindlu zangempela kanye nokuxhumana nezikhungo zomphakathi
Leli yihloko elizobhekana neNgqungquthela yesibili ye-Geometer yezobuchwepheshe, ezoba ngo-23 ka-Okthoba we-2015 eMadrid. Muva nje, imithetho eminingana yomthelela omkhulu iye yamukelwa impahla yezindlu. Le ngqungquthela izobonisa ukuthi ukuguqulwa koMthetho Wokuphathwa Kwezimali NeCadastre, ndawonye ...
cadastre, Ukuphathwa Land
I-20 Izinyathelo zokwakha umuzi kusukela ekuqaleni
Lena into ngalendoda sika kubalandeli of Urban Ukuthuthukisa kanye Nokuphathwa Land, ukuthi ngale ukubhema emadolobheni smart ukuthi abukeke njenge ujabule ekhombe ukunambitha nzima nakakhulu ephakanyiswe ngezinyathelo 20 lula, inselele zona zokubheja amazwe afana neGibhithe ne-Equatorial Guinea kule ...
Ukuhlelwa Kwendawo Kuchazwe
Ukuhlelwa Kwendawo kuyithuluzi lokusetshenziswa okusimeme kwemithombo yemvelo. Kwaphela iminyaka eminingi ensimini-Peruvian selidliwe ngaphansi logic ukwenza kakhulu kwemithombo yemvelo, kwezinye izimo okubangela imithelela emibi imvelo base elikhiqizayo yezwe, futhi odala ...
Geospatial - GIS, Ukuphathwa Land
Yeka ukuthi geomatician kufanele bazi mayelana standard LADM ukuphathwa komhlaba
Kuyaziwa ngokuthi i-LADM kumgangatho wokuphatha umhlaba (Land Administration Domain Model), okwazi ukuba yi-ISO 19152 kusuka ku-2012. Akuyona isofthiwe, kodwa imodeli yombono echaza ubuhlobo phakathi kwabantu nomhlaba; ukumisa lokho okubonakala ezweni ngalinye kuhlukile futhi ...
cadastre egeomates yami
Ukubusa Komhlaba: indlela ye-LGAF
Iyaziwa ngokuthi i-LGAF, indlela ebizwa ngokuthi iSpanishi ibizwa ngokuthi yi-Framework for the Assessment of Land Management. Lokhu kuyisisetshenziswa lapho kutholakala khona isimo sezomthetho ezweni, ngokwemithetho kanye nemikhuba ehlobene nenqubomgomo yomphakathi ikakhulukazi ngokuhlala kanye ...
I-Global Mapper ne-3 inkambo ngaphezu kwe-Civile
I-Civile inkampani ehlinzeka ngemisebenzi ehlukahlukene yokubonisana nokuqeqesha ngokubambisana nezinye izinhlangano emkhakheni, ezindabeni ezinjengokuthuthukiswa kweprojekthi yezobunjiniyela, ukuhlela izindawo kanye nemvelo. Kulesi simo sigcizelela okungenani izifundo ze-4 eziseduze ukuqala, konke okumele kwenziwe eSeville: IMODELO YOKUPHILA, MODFLOW Lokhu ...
Ukufundisa CAD / GIS, Ukuphathwa Land
INkosi Land Management UNAH
Master of Planning and Land Management anikezwa National Autonomous University of Honduras (UNAH), wuhlelo zezemfundo kusukela yaqala ngo 2005, ubulokhu ngokuhlanganyela noMnyango Geography e-University of Alcala (Spain) . Ukuze umbuzo elafika kithina intombazana izinsukwana edlule, sithathe ithuba ...
I-Latin America Forum on Instruments eziphawulekayo of Ukuvimbela Urban
Uhlelo lweLatin America neCaribbean lweLincoln Institute for Land Policy lumemezela lesi sithangami esibalulekile, esizoba eQuito, e-Ecuador kusukela ku-5 kuya ku-10 ngoMeyi ka-2013. Ihlelwe ngokubambisana ne-State Bank yaseRiphabhuliki yase-Ecuador, inhloso yayo ukusabalalisa, ukwabelana nokuhlola ...
Nge co-uxhaso we-Association of zokuma kwendawo ePeru UNIGIS, Geowebss inikeza uchungechunge oluthi "isimo kwamanje cadastre kanye namasu informatics kanye telematics sokuvuselela" okuyinto izobanjelwa ngoLwezihlanu nangoMgqibelo 10 11 2012 Agasti. Umcimbi ubuso nobuso uzoba ePeru kodwa abasebenzisi bonke ...
cadastre, Ukufundisa CAD / GIS, Ukuphathwa Land
Inani amasu kolwazi indawo
Njengengxenye isethulo Geological Map seziqhingi zaseCanary Islands, zizokwenziwa zibe ofeza Technical lenkomfa The Strategic Ukubaluleka Imininingwane Wendawo. Legumbi lezi izogxila zolwazi lwendawo, ukuthi indlela enengqondo futhi esingaguquguquki ulwazi imvelo ngokomzimba umhlaba futhi kwemvelo yayo ...
Cartografia, Ukuphathwa Land
I-Trans 450, Ibhasi elihamba ngokushesha leTegucigalpa
Le phrojekthi ethakisayo manje eyenzeka eHonduras, ngaphansi kwesimo se-Bus Rapid Transit (BTR). Nakuba manje kuleso sigaba sokuqonda ngaphambi kokuba abathwali abangenalo ukucaca ukuthi amadolobha aguquke kanjani, kubonakala ngathi enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni i-axis axis ...
Innovations, Ukuphathwa Land
Izingqikithi zaseGuatemalan Surveying Congress
Sekuqedile inhlangano yezokuphatha komhlaba nokuHlola okuqhutshwa eGuatemala, inyanga edlule, bebebekiwe ngezindatshana zababukiso. Zitholakala ekhasini elilodwa, nakuba kungcono kakhulu ukuzibona ku-Slideshare, kusuka lapho zingalandwa khona. Ngikisela ukuwalayisha nokuwagcina efayeleni lakho siqu, ucabange ukuthi kulezi zikhathi ...
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ikhasi elilandelayo